The Mr. Smith kushanda uye kushamwaridzana panguva iyo paanosangana ne 'kufunga kwakasiyana': Martin Vrijland
The Mr. Smith inokonzerwa nekuvhiringidza kwepakati paanosangana ne 'mafungiro akasiyana'
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pa 2 May 2017	• 44 Comments
Ndiani anoyeuka mifananidzo kubva mufirimu ye trilogy 'The Matrix' kubva ku1999 umo chero munhu upi zvake anenge achipfuura anogona kuchinja kamwe kamwe kuti ave 'mujeri'? Kubvira pazuva randakatanga kunyora, mhanho huru yakatanga kundiita dema. Izvi zvinoratidzika mumapepu ayo ose asina ruvara rwemaspunda pamusoro pangu uye munhu wese anoona Facebook yangu peji anowirirana nechisungo kune uyu mupfuri. Izvozvo zvinofanira kuvhara uye zviri pachena zvinodaro. Vanhu havadi kuva veboka iro rinotevera "kupenga mano ekufunga." Uku kukanganisa kunoitika nenzira yakarongeka uye nehasha uye inoita seinoitika nenzira yakarongeka zvakanaka nekubatsirwa nevashandirwi vehurumende (uchapupu hwehwu hwave huripo huri pano panzvimbo ino). Izvi zvinogadzirisa zvinokanganisa 'mishanu monkey chiitiko' umo boka rembongoro rinoranga imwe monkey pakarepo paanenge achida kukwira makera apo bhanana iripo. Iboka iri maitiro rinorongwa mukati mushure mekudzokorora kwemazimbe anotonhora pane boka rakaedza kukwira makera (ona pano iyo tsanangudzo yose yekuedza). Chinangwa chekurwisana uku ndecheviri; kune rumwe rutivi, zvinofanira kunge zvakandidzivisa kuti ndirambe ndichinyora, pamusana pemigumisiro yekuzviparadzanisa; kune rumwe rutivi inoratidza vamwe kuti havafanire kukwira iyo makanho. Basa iroro rakakundikana kusvika kure. Ndinoramba ndichienda. Dodging bullets, inonzi iyo mumufiriyo The Matrix.
Vashandi vari mufirimu The Matrix vanogona kupararira chero nguva. Munhu wose anoita seanogona kuchinja spontaneously kuva nhengo kana kamwe munhu mukuru Neo anoratidza mumatrikisi. Zvichida unozviziva; kana uri kutaura pane imwe nguva pazuva rekuberekwa kana kubasa pamusoro pemisoro inobata chokwadi chevanhu. Nomuzvarirwo vanhu vanogona kutora wakakura kuvengana, nokuti kungori pfungwa inotokonya manzwisisire avo munyika. Morpheus, mumwe munhu mukuru mufirimu, anotsanangura muvhidhiyo iri pasi apa kuti izvi zvinoitika sei. Chero bedzi vanhu havaoni kuburikidza kuti tiri kurarama illusory chokwadi, yakavakwa murongedzeri kukuru (sezvo airemekedzwa ari vepamusoro epachivande), wairindwa neimwe kirasi vapfumi uye ravane munhu asi anonzwisisawo maitiro uye saka pacharo mutarisiri hurongwa ichashandura pakarepo iwe paunenge uchinge waisa purogiramu; chero bedzi ivo vachakurumidza kuchinja uye kutungamirira nzira kuenda kwauri. (verenga zvakawanda pasi pevhidhiyo)
Mafirimu ekutevera kubva kuThe Matrix trilogy pakupedzisira anotungamirira kune rumwe rudzi rwehumwe pakati pechirongwa chemugadziri mukuru uye vanhu vakamuka; umo kodzero yekuvepo yegadziriro iyi, sezvakadaro, yakasimbiswa nekutadza kusingaperi kusingaperi kweNeo kurwisana nekunyatsonzwisisa urongwa. Izvi ndezvechokwadi chishuvo chevanhu vanopfurikidza nehurumende uye elitist force field. Mweya yakamutswa inofanira kunge yakaguma yakafanana nekuvapo kweMatrix uye inakidzwa nezviyero zvisingagumi zvinogona kubuda. Zvechokwadi, iyo firimu yaiva inoratidzira firimu yemaparaganda, ine chokwadi chakawanda, asi yakatungamirirwa kune izvo zvisinganzwisisiki patinonzwa vanhu vakaita seGoogle foreman Ray Kurzweil naMichio Kaku vachitaura pamusoro (ona pano).
Saka icho chinhu chinorema kukurudzira vanhu kuti vamuke kubva kuhutano. Asi chii ichocho masangano? Chii chinonzi matrix? Kuti tikwanise kunzwisisa izvi, zvinobatsira kutora pfungwa dzevanhu vakaita saRay Kurzweil, Michio Kaku, Elon Musk nevamwe vaparidzi uye avo vanodzingisa transhumanism. Vanofunga kuti nokuda kwe2045 isu tinokwanisa kugadzira zvinyorwa zveanotechnology (makopi) emuviri wedu wenyama, umo tinogona kuisa pfungwa yedu. Izvi zvinoratidzwa nenzira inofadza uye zvinyorwa mumifananidzo yeTranscendence. Vanofungawo kuti isu tiri digital Augmented reality kusika nyika inoita seicho chaiyo muupenyu uye kwatinogona kurarama sekuti isu tiri kurarama imomo imomo. Funga nezvemutambo uko une chokwadi chaiyo magirasi pane uye umo iwe unonyatsozvizivisa iwe nemutambo iwoyo. Asi munzira kuti kuziva richiri inobatwa pfungwa dzedu, sokunge kuti kubatanidzwa nomumwe ne 'gore', saka hatichina musiyano pakati muviri wedu, pasi redu, redu muchadenga uye digitally akasika universes. Icho hachisi chikonzero chekuita rangano; ndizvo varume ava kuzivisa pachavo. Ndapota chengetedza YouTube nekutsvaga mazita anonzi pamwe chete neshoko rokuti 'singularity'.
Sezvo vanyoro vakadaro, ndiani angangodanwa achinzi vanobudirira bhizinesi vanhu (verenga pano zvimwe), tichitenda kuti tinogona kuisa pfungwa yedu kudivi inogadzira nyika uye, sezvazvakaita, inopindirana mu 'gore', ungashamisika kana iyi isiri iyo iye zvino. Icho chiri chiyeuchidzo chemufirimu The Matrix. Funga pamusoro pekuti zvinogona kuitika here kuti chokwadi chauri kurarama mazviri chingave chiri chinhu chaicho chakagadzirwa. Ramba uchifunga nezvenyaya dzezvisikwa zvezvitendero zvakasiyana. Zvingave here? Icho ndicho chinenge bhiriji rakanyanya kusvika kune vakawanda. Dr. George Smoot akapa iyo inoratidzika semashiripiti TED mharidzo iri pasi apa. Tora nguva kuti uione. Nokuti hapana, sayenzi uye vanhu vanopfurikidza vanobatanidzwa zvikuru mubasa iri. (verenga zvakawanda pasi pevhidhiyo)
Zvadaro tinouya kumubvunzo wokufungidzira kana zvingave zvichiita kuti pfungwa dzedu dzatovhiringidzika muhurongwa. Fungidzira kuti Google yakakwanisa kuumba zvinhu izvi zvegadhidhi zvakaparidzirwa naRay Kurzweil uye iwe unosarudza kuisa ruzivo rwako kune yakadaro. Ndiani zvino anotonga chiitiko chenyu chechokwadi? Icho ndicho chokwadi mutungamiriri we'gore '; mutungamiri weArtificial Intelligence simulation; mutungamiri akaisa pfungwa yako; Google. Zvingave here kuti mamiriro ezvinhu aya atova kushanda? Izvozvo zvingangova zvinoshamisa uye zvinosvika pakufunga kwemafungiro mumaziso evanhu vakawanda. Asi kana iwe uchifunga kumashure kwemafirimu The Matrix uye iwe unofunga kuti Hollywood iri mumaoko evakadzi vechikoro iyo inotipa pfungwa yokuti scifi inofananidzira mifananidzo yaunofarira paunonwa doro uye bhegi re borrelnuts inobvuta, iwe ungatora dambudziko kukuchera mberi.
Mune zvikamu zvakasiyana-siyana webhusaiti inofananidza kuti chokwadi chedu chatiri kurarama chakafanana sei soul prison; dzakadai seGoogle zvinogona kutora pfungwa yedu munguva yemberi kana tikasarudza kuisa iyo kudivi univers universes (zviyero) zvakagadzirwa na Kurzweil & co. Ndapota tora dambudziko kuti uverenge zvinyorwa izvi pasi pezvinhu zve menu "the matrix','kunze kwematrix'uye mamwe mapoka. Zvechokwadi iwe unogonawo kungoramba uchitenda kuti hakuna urongwa uye kuti Martin Vrijland anoda kuzivisa nyaya dzinonakidza. Handigoni kukupomera mhosva nokuda kweizvozvo. Izvo zvakanaka chaizvo kutetwa kana pasina pfungwa yakadzika yekuziva kuti kutsvaga uku kunotanga. The ona kuburikidza kana akamuka kazhinji kunotanga kuona kuburikidza nhema munhau uye nezvinhu zvakafanana dzakaitika falsification uye kungaita kuti kuwanikwa kuti vapfumi kirasi kuti anoita kuti Saturn-kunamata. Zvichida kuwanikwa ndeyekuti Saturn angangodaro ari chronos mainframe yenguva ino-mweya wakasungwa jeri. Izvozvo zvinoratidzwa neHollywood zvishoma mufirimu Interstellar kubva ku2014. Hazvisi zvekuti iyo firimu yakakunda mibayiro ye6 pa 'Saturn Awards"(usabhadhara zita racho) mu2015. Unokurudzirwa kufunga here?
Source chinyorwa listings: vari.com
Transhumanism, chii ichocho uye sei chichikuvadza iye zvino?
Chikonzero nei nyika yakashanduka ikava jeri rakazaruka mumakore mashomanana
5G internet yose muNetherlands chipo kana rako jeri rejeri?
Facebook ichashandisa huchenjeri hunofanirwa kuongorora zvaunogona kuverenga
Multiple dimensions, software simulations, pfungwa kana mweya. Ichokwadi chii?
Tags: Featured, google, Martin Vrijland, Mr. Smith zvakaitika, ray kurzweil, singularity, The Matrix, trilogy
Averroes akanyora kuti:
Uye saka EU inowedzera hutongi hwemakomunisti apo munhu ari pasi pehurumende. Yakaparadzaniswa ne-transhumanist agenda nejeri yejeri (kuchengeteka net net), iyo ichapa vanhu ruzivo rwekupedzisira uye rusununguko rwokusununguka rwakashanduka.
"Kana iwe uchida pane zvenguva yemberi, fungidzira chikepe chiri kutsika pameso evanhu - nokusingaperi."
Changamire anoti inofanira kusimudzwa maererano neEuro Politburo:
Chirongwa cheKalgergi chinowedzera kuitira kuti chimiro chemunhu wacho chirasikirwe, kuitira kuti munhu wacho azvipe nyore nyore kuhurumende.
Kushandiswa kwekodzero nekudzivirira mukati meEUSSR uchishandisa makambani epamberi akadai sa Facebook / Google, nezvimwewo.
Austria iri kutsvaga maidiyiti edijithali seAlfabhete Inc. ndeGoogle kana Facebook Inc. kubhadhara mitero yekutengeserana nevashandisi venyika, vachiedza kuvhara mutero wenyika ichiri kugadzirirwa bhizinesi-uye-bhizimisi bhizinesi.
The kupfuura chinzvimbo chikamu urongwa kurwisa basa yemashoko Twitter Inc., Google kana Facebook: The tacit chibvumirano pasi vangani vateveri kutsvaka, nezvaanoda, nokuisa uye tweeting anoramba vakasununguka sokuvapo vanoshandisa kutendera mapoka zvokudya kushandiswa Data kupinda algorithms Kuti vabatsire musoni zvokushambadzira iyo inogona kuenzaniswa nevaya vanogona kunge vatengi.
CHIMWE CHINOKOSHA CHINOKOSHA ....
Kuzivikanwa kweElectroni muEurope:
Zvinetso zveMitemo uye Zvimwe Zvamangwana (e-ID 2020)
KUCHINJA KUZIMA ZVOKUDZIDZA NOKUDZIDZA ZVINHU.
KUKUNDA KWEVANHU KWEVANHU NENNOVA
Kuenda kune pan-European
kuonekwa kwe elec
Project full title: Kuchengetedza Zvakachengetedzwa Pasi Pose Pamakumbo Akabatanidzwa
Zvinyorwa zvinowanzoenderana neEID
TIRI KUZIVA HERE ZVINHU ZVENYANYA ZVENYAYA ZVENYIKA ... BELL RINOPINDA. DATA MUMWE NYAYA DZE EU EU COMMISSION NA GOOGLE / PALANTIR (CIA / NSA / DIA nezvimwewo)
Kudengenyeka kwenyika ikoko muGroningen ... kune gadziriro shure kweiyo inogona kujeka:
Vakagadzirira kusvina maoko avo paNSA (SkyNet) ...
CuriousOne akanyora kuti:
Zvinonakidza zvaunotaura pamusoro pe SkyNet, muBelgium kunewo muwani we internet anonzi Skynet. Inonzi mazita mushure mokutengesa mumutambo weChirinator
Uye kana tikatarisa firimu Terminator (5) Genisys unoona kuti inotiudza SkyNet akasikwa kuti nda uye 1 rose muchimiro murume kuumba simba usingafi nhangemutange. Haisi iyo iyo Google inoda kuita maererano ne2029 / 2045?
"Nzira yekuwana kusafa inotanga ne 2029 apo nano-bots zvisikwa zvinogona kupararira kuburikidza nemitumbi yedu kurwisa zvirwere"
Icho hachisi icho chatinoona mumutambo weChirinator, muviri wemunhu wakasungwa ne nano particles here?
Wakanganwa kuudza chinyorwa:
@CuriousOne, Izvo zvose NLP / subliminal mharidzo yatinotarisana nesu uye Hollywood chikamu cheiyo. Mufirimu wakanaka pamusoro pemishumo iyi ndeyokuti 'Vanogara' kubva ku1988. Ruzhinji rwevanhu rwakagadzirirwa kwemakumi emakore kuti kushandiswa kwe "transhumanistic" kunyengedza mararamiro kuitira kuti vasiye basa apo nguva yacho yasvika.
The YZ chizvarwa chakanaka sezvakarongwa kana. vakarasikirwa uye vachakundwa nekunyengera uku:
- Y = Chizvarwa Y ndiye anotsiva kuchizvarwa X uye anowanzosanangurwa achishandisa 1982-2001 nguva.
- Z = Uye pakupedzisira chizvarwa Z; ani nani akazvarwa pakati pemakore e1992 kusvika nhasi anoverengwa pakati pezera iri.
IGoogle (DARPA) inoenderera mberi inoenderana neUnited Nations Agenda 2030. zvose tinonzwa kubva Diaries 21 (Club of Rome) okuti kuenderera, nemamiriro okunze, etc. zvisina kupfuura kurwiswa CO2 inova inokosha inotonhorera zvakasikwa uye unogona reconnect vemo rutapudzo (ona mharidzo Bill Gates pamusoro pemishonga)
SkyNet ndiye (quantum / D-Wave) Database NSA uye muchiuto mumaindasitiri kunzwisisa (DARPA) uye Genysis ibato rakatanga muna 2002 ne 'United States Department of Defense kuti Information Awareness Office "Dhipatimendi iri pashure okutsutsumwa (ona logo Yemaziso Awareness Office) iyo inonzi yakasunungurwa uye PRSA yeNSA ndiyo migumisiro yeprojekti iyi. Mune maonero angu, izvi zvose zvakafanana uye zvakafanirwa kuenda pasi pasi. Ona zvataurwa naElon Musk nezveDUMBs munyaya ino:
BIG Data ndiro mupfuhwira shoko kuti vazadzwe Databases izvi uye ndyaringo ndechokuti vanhu vakawanda kuti ichi kuzviranga nokuzvidira kuti mupiro kuburikidza Profiles dzavo Facebook, Twitter, Google+ nezvimwewo uye kusvikira kufambidzana uchishandisa Palantir Software etc. zvinogonawo kuratidzwa zvakajeka zvinosanganiswa nehukama hweumwe munhu. Zvekutengeserana, zvechokwadi, pfungwa inofadza kwazvo, saka inoponesa shiri dzakawanda mune imwe yakawa swoop. Gadzira kusengedzwa kweEUSSR ne PSD2 uye vatatu vasina mwana kuti vawane ruzivo rwakakosha pamusoro pevanhu.
Muchidimbu, mambure akavhara zvishoma nezvishoma ...
Uye iyi ndiyo nzira iyo inotanga ... munhu achiri kushandira nyore here?
Apo ini ndichiona ruzivo pamusoro pevhisi dzepachivande uye zvigadziro zvepasi, ini nguva dzose ndinoona ruzivo pamusoro pemamiriro ezvinhu muU.S., asi hazvifaniri kukanganwa kuti izvi zvakare zviri muEurope.
Kuti urambe uri paNyNNet uye wobva washandura ku facebook, facebook haisi kutanga kutora vanhu asi zvakawanda kuti uwane kuchengeta manzwiro nemafungiro mune d database kuitira nguva iyo munhu wese ari kushamwaridzana ne SkyNet wakatotora purogiramu inofanirwa kukodzera unhu hwako kuitira kuti iwe wakasungirirwa nayo nekukurumidza uye inokurumidza kukurumidza mumuviri wako.
Iye zvino vane chete vane simba pamusoro pekuita uye nekufunga neNLP uye mazwi e subliminal uye gare gare ne Skynet pamusoro pemuviri.
patsanura Izvi zvichava zvisingaiti nokuti Software yakanakisisa zvakanyorwa pamusoro muviri wako uye ukaramba kunoenderana mamwe mashoko nezvokuti ungabata sei kugadzirisa chirongwa achawana zvakadzama uye iwe achadonha. Kunze kwekuti iwe unogona kuzvibvisa kubva pamatrix uye udzokezve kudzora muviri wako.
Sezvo ini ndimene zvakawanda kana zvishoma pacharo, chokwadi ichi 1-2 Makore akapfuura ndisati ndaziva zvakanaka nezvakaipa, nokuti ruzivo zvikuru / disinfo ari mambure uye YouTube kuti dzimwe nguva miti haachagoni kuona kuburikidza musango uye Ndakaona kuti nyika inoshanda sei uye ini ndisingatombooni TV kana mafirimu. Ndaiwanzotarisa mafirimu nokuti vaifadza uye vaifungidzira apo ini ndakatarisa ikozvino handisi chimwe chinhu kunze kwezviratidzo uye mharidzo yakavanzika. Dzimwe nguva ndinomira bhidhiyo, kuidzorera zvakare uye kuongorora / teerera kune imwe yekurekodha 2-3 nguva uye handisi nguva dzose kushamisika kuti nyika inoshanda sei. Uye vakashamisika kuti vangani vanhu vakasungirwa kuTV yavo manheru sekunge kuti chinhu chitsvene uye kutenda zvose zvinotaurirwa uye zvinoratidzwa. I mhosva hapana nokusingaperi nekuti dzandakamboenda saka ndinogona kuvapa zano rakanaka kuti ndinotevera pachangu uye vaone sei zvose zvinonyatsoenderana pamwe chete, vakati kusarudza pakati tsvuku kana zvitema piritsi.
@CuriousOne, Iro pamusoro pekutonga kwehuropi (kutarisa) imwe yakatofambira mberi zvikuru kana iwe ukatarisa bhizinesi mukati meuto rezvemabhizimisi (kusanganisira DARPA). Uye iwe unonyanya kutarisa maitiro emagetsi (ELF Waves). Sezvakataurwa naIkolakola Tesla, zvinhu zvose zvinowanzoitika uye kudengenyeka, kwete kwepasina mabhizimisi ake anoshandiswa ne'kati yakadzika '.
Iye zvino funga nezvezvinoitika uye kushandiswa kwe4G / 5G uye kune ikozvino kunonzi GRID panyika, pagungwa uye mumhepo. Mune mamwe mazwi, hapana kana kupunyuka kubva pamagetsi. kupinda mukati. Nokuti sezvinotsanangurwa mubhuku riri pasi apa, randinokurudzira zvikuru, ubongo hauna moto. Zvose zvisinganzwisisi zvinopinda zvisina kufanana mushure mekugadziriswa kweavo vane ma-cortexs anokanganisa kune imwe yakakura kana zviduku kutevera rationalization cq. kufunga. Kana iwe uine simba pamusoro peizvi, unotumira munhu wacho kurega kushandisa zvishandiso. Muchirevo ichocho, ndinokwanisa kurondedzera basa raMarvin Minsky (mapepa mapepa) uye Dr. Robert Duncan (kuridza mhere)
US Views pa "Wonder Weapons": Kuchinja Mazwi-Kuchengetedza Maitiro emuviri
Ndeapi magetsi akadzidzwa neUnited States ane simba rekuvhiringidza kudarika-kugadzirisa zvigadziro zvehupenyu hwevanhu? The 7 July 1997 nyaya US News uye World Report akatsanangura dzakawanda panguva kana navo zvakagadzirirwa, pakati pezvimwe zvinhu, kuzunguza tsandanyama ari mukati nevanhu, stun kana nauseate navo, akavauraya kurara, kudziyisa navo, kana kuchivabudisa pasi ndisingafungiri chinozunguzirwa  Unyanzvi hwekombiyuta hunosanganisira lasers inoshamisa inogona kumanikidza vadzidzi kuvhara; acoustic kana sonic frequencies zvinokonzera marwadzo uye mararamiro; shandisa nhengo dzomukati dzinokonzera marwadzo nekuputika; uye kutyisidzira mafungiro ane kukwanisa kugogodza pasi vanhu kana ndege uye zvinogona kusanganiswa ne pepper spray kana makemikari. 
Nekushandurwa, izvi zvekugadzirwa kwekombiki zvingashandisa zvakawanda. Acoustic zvombo Somuenzaniso, zvinogona chakatorwa kushandiswa sezvo acoustic akabatana nepfuti kana acoustic minda, kamwe yakasimbiswa, kuti kudzivirira zvivako, kubatsira mubatwa nokusunungura, kuzvidzora mhirizhonga, kana nzira akajeka convoys. Aya mafungu, anokwanisa kupinda muzvivako, anopa mikana yakawanda yehondo nemauto ekuchengetedza mutemo. Microwave zvombo, nokuita kuti masero ari peripheral tsinga, anogona vakuchidzire muviri, kunyengedza zvipusha-zvakadai nezvipusha, kana kukonzera cardiac kusungwa. Mhepo yakadzika-miviri yakawanda inokanganisa zviratidzo zvegetsi uye zvirwere-firi uye kusuruvara. Other zvirongwa vakatsvaka PA kufurira kana kudzivirirwa muhwezva, kana kuti sei zviratidzo kubva injini cortex mugove uropi, revane nokuzvidira tsandanyama masangano. The Ekupedzisira vari reffered kuti sezvo kupomba chinozunguzirwa zvombo, uye hurumende yeRussia rave anonzi akatenga pamusoro 100,000 makopi "Black weChirikadzi" shanduro pavo. 
Zvisinei, maonero aya e "zvishamiso zvinoshamisa" aipikisirwa nomumwe munhu aifanira kuanzwisisa. Brigadier General Larry Dodgen, mutevedzeri Assistant kuti Munyori Defence nokuda Policy uye Missions, akanyora tsamba kuna mupepeti pamusoro "vakawanda panguva mashoko okuti" muna US News uye World Report nyaya kuti "zvisizvo weDhipatimendi maonero Defense kuti."  Dodgen ndeyekutanga ndeyekuti magazini iyi yakataura zvisina kufanira kushandiswa kwemichina iyi uye kukosha kwavo kune mauto ehondo. Ook He zvakanyatsosimbisa US chinangwa kushanda mukati kutsanangurwa chero dzakawanda chibvumirano Panyaya chikumbiro chavo, uyewo urongwa kusiya (kana kanenge redesign) chero chombo kuti countermeasures vari sei anozivikanwa vateveri vakawanda. Imwe inosara nemanzwiro, zvisinei, kuti kutsvakurudza munharaunda iyi kwakanyanya. Boka risina kutaurwa naDodgen nderimwe dzimwe nyika kana vasiri vemaiti vemaitiro vangave vasina kusungwa nematambudziko akafanana. Zvakaoma kufungidzira mumwe mukuru chido pane magandanga kuti maoko avo pamusoro kwetunhu michina. "Psycho-ugandanga" aigona kuva chinotevera buzzword.
Mharidzo yakanaka uye pakupedzisira mubvunzo wakakosha zvikuru kubva kuna Harald Kautz Vella (pane 54: 40) pamusoro peCreutzfeld-Jacob uye kuedza kwemombe nevanhu muEngland ± 1997.
Pane chikonzero chekombiyuta iyi here? Zvakanaka, Holosonic Research Labs neAmerican Technology Corporation, zvose zvine mavara ehurukuro inenge isinganzwiki. DARPA inoratidzika iri kushanda payo payo sonic projector. Zvinoshamisa, Strand Page reports iyo iri kushandisa Long Range Acoustic Device sechishandurwa Voice of God weapon:
pane kuedza ne 5G muGroningen, Friesland handina kuwana chinhu chinyorwa pamusoro payo. Kunze kwekuti ivo vanopinda mune dambudziko ipapo:
"Chirongwa chikuru kupfuura zvose muNetherlands chiri pedyo nemusha weFrisian weBurum. Kukurukurirana kwepaTesaronika kuri kuongororwa nehurumende dzeDutch neAmerica kuburikidza nemahombekiti akawanda ezvitereti. Iyi nzvimbo inotarisa inoratidzika kuti inomira munzira yekufambira mberi kwemasangano e4G muNetherlands.
The kwomwedzi pasi yeredhiyo Friesland Burum, apo Dutch AIVD (General Intelligence uye Security Service) uye diff (Military Intelligence uye Security Service) kunge Satellite madhishi kumira nokuda eavesdropping uye vasori, kukudziridza 4G network muNetherlands sokuti zvikuru munzira vatsvakurudzi vatsva veTerecompaper vakawana. "
Saka zvinoita sezvine musoro kuti vari kuedza kuti dambudziko iri kuti lossen..Friesland uye yeGroningen vari akakodzera sezvo mutyairi wendege nzvimbo nokuti chinhu mhando ichi, nokuti pane vazhinji chinhu uye kwete zvakakwana zvinogona kwokubatana kuvaka Washington City Offices .
Haisi chakavanzika chakadai ????
@ Averoes Matambudziko aya muFriesland anongowedzera kuwedzera 4G / 5G network pa 3000 + MHz frequencies. Vari kutogadzira 4G pa 800 / 1800 / 2600MHz mutambo 5G ichaiswa pa 700Mhz zvakare pa 2100 uye 2600MHZ kana ndisina kukanganisa. Iyo yakaderera iyo inowedzera yakasimba simba, asi iyo yakaderera dhamba re data, chiratidzo chepasi chinogona kuderera zvakadzika mudzimba uye chinogona kuenda kuburikidza nezvinhu uye zvipingamupinyi zviri nani. Iyo yakakwirira iyo nguva, iyo isina simba chiratidzo asi iyo yakakwirira yedhara data inogona kuva.
Example pamwe WiFi izvo router iri pakati peimba apo iwe ikozvino 2.4Ghz bhendi uye 5GHz bhendi 2.4Ghz bhendi anogona panze asi vagamuchira asi chichava kunonyanyisa date mwero BV 150Mbs, simba, chiratidzo zvishoma sezvingatarisirwa asi vachingove iwe uchiri kugamuchira, pa 5GHz band ma max datarate Bv 300 Mbs achave asi iwe haugoni kugamuchira ichi chiratidzo kunze kweimba zvachose.
Uyewo zvinotarisa kuti sei uye sei iyo chiratidzo chinoparidzirwa, ndinoziva kuti vari kuwedzera kuisa antenna matsva munzvimbo itsva kuitira kukwanisa kuparadzira mafambiro akakwirira kuitira kuti vakwanise kugovera nekukurumidza uye deta yakawanda. uye izvi zvakawedzera pakufambisa kwakanyanya mumwedzi ichangopfuura. Zvose munzvimbo dzevanhu uye mukati mezvivako / makambani uko Wi-Fi 3g / 4g uye 5g inofanira kuwanikwa.
chikafu chinonakidza icho Duncan, asi muti wemizambiringa ????
maererano nehutano hweBBC iro dambudziko reBSE rakapoteredza rakapoteredza 1986:
Iko kuedza ndekwangu sekugadzirira sechando..Fryslan neGroningen nzvimbo dzakanaka
Varimi muNetherlands, zvikurukuru kuchamhembe (kumabvazuva), havasi kukurudzirwa kuchengetedza mapurazi avo nechikonzero, ona zvirongwa:
'Zvechokwadi 1000 varimi vemazi vachakurumidza'
Mumwedzi inouya, 1000 icharamba ichiita varimi vekurima 2000, inotarisira State State Secretary Van Dam. Anofunga kuti nhamba yevarimi inoshandisa nzira itsva yekugadzirisa, chikamu chechibvumirano pakati pake nevarimi vemichero iyo European Commission yakagamuchira manheru ano
Chivharo chevhavha yezvinhu zvakaderedzwa kushandiswa kwemafoni
Hurumende inoda kusimbisa nzvimbo inotungamira pasi iyo iyo Netherlands iri mumunda wekutaura kusina wireless. Ndicho chikonzero Mutungamiri weMari weChealth Affairs achaisa mari yekuita mari mune ramangwana kushandiswa kwezvikamu, kubva ku5G. Iyo inosungirwa inoshanda inonyanya kunzvimbo dzinogarwa muNetherlands uko kushamwaridzana kwemafoni kusati kwakanaka. Mutungamiri Kamp akazivisa izvi mune tsamba kuImba yeVamiririri. Pakutanga mwedzi uno, hurumende yakanyora kuti 'nguva dzose uye kwose kwose' kusvika pakutaurirana kusina wireless sezvinodiwa zvinokosha.
William Binney (ex-NSA) anotsanangura kuti:
Sangano rezvematongerwo enyika iro rakanyanyozivikanwa nehupfumi hwemamiriro ekugadzirwa, kutakura uye kutengeserana, uye nekugadziriswa kwekutengesa kwematengo (kureva kwete pamisika). Zvematongerwe enyika nekuda kwebasa rinotungamirira reCommunist Party; uye nekunamata kubudikidza nekutonga kwemasangano ose ezvemagariro neboka rimwechete.
Kutevera izvi, enzanisa magwaro kubva ku STORK (EU) uye zvivakovheni zvinofananidzwa pane izvo DARPA (= Google, pakati pevamwe) yakagadzira kuburikidza nesangano rayo re Total Information Awareness / Genisys:
Human Identification at Distance (HumanID)
Dhiagiramu (kubva kune yepamutemo IAO site) inotsanangura mano e "Human Identification At Distance" chirongwa 
The Human Nokuzivikanwa ari Distance (HumanID) chirongwa yakatanga zvoga biometric kuzivikanwa michina kuziva, Ziva uye kuona vanhu panguva madaro marefu kuti "simba dziviriro", kuparwa kwemhosva, uye "nyika kuchengeteka / kudzivirira" zvinangwa. 
Zvinangwa zvaro zvaisanganisira zvirongwa zve: 
Shandisa maitiro ekuwana nekuwana zvidzidzo kubva ku 150 mamita (500 ft) mumakero.
Fuse chiso nekutarisa kuonekwa mune 24 / 7 vanhu zviratidzo zvekuzivikanwa.
Ita uye uratidze chiratidzo chevanhu chinoshandisa 150 mamita (500 ft) achishandisa mifananidzo inooneka.
Shandisa simba guru millimeter wave radar system nokuda kwenyika yakawanda yekuona maonero uye nzvimbo yakamanikana yekuona gait classification.
Unhu hunoshandiswa nehutano kubva pavhidhiyo yekusarudzwa kwevanhu ari kure.
Iva nehutachiona hunoonekwa uye hunoonekwa hunoonekwa.
The irony ???? vanhu iye zvino vanotarisira mavoti Facebook, Google+, Twitter nezvimwe
Google 'Sieg' Hire yava kunyatsofungidzirwa muvhidhiyo iri pamusoro apa:
Inofanira kuva rudzi rwe LinkedIn killer; ATS uye nzvimbo yekutsvaga inotsvaga mune imwe. Vashandi vanogona - maererano nemahepe - post jobs (sezvakaratidzwa peji ino), panguva yekutarisa kubuda kwevaverengi. Google Hire iri (zviri pachena) inosanganiswawo neGoogle maakaunti. Izvi zvingangopa kupa ruzivo rwakawanda pamusoro pevashandi nevatsvaga.
PasOpSmoking Inodzivirira Brainwashing akanyora kuti:
Ini ndangoshanyira nzvimbo yehurumende barracuda, blogspot. Nguva yekupedzisira yaiva yeA2 yemakore apfuura nekuda kwekutsvaga kushungurudza paakaverenga 'Mr Smith effect' zvinyorwa, kana ndakanyora zvakarurama, kunyanya zvakanyorwa neDutch government gurukota Jeroen Hogeweij, nhengo ye Rotterdam
Masonic club 'Cafard d' Or '(The Golden Cockroach)
Mune zvinyorwa zvitsva zvakanyanya pamusoro pe barracuda mhirizhonga yevanorwisana nevashori vanosvika pachena:
Mutungamiri akadzidziswa mumiririri Maud Oortwijn anoda kufungidzirwa
Kune mamwe ose, Micha Kut zvinosvika pamwe chete, 'Dare rekare' uye anonzi animbova musha wemadzimai Koos Woudenveld nenhau yake yejongwe pamusoro pe rolodex pedo network.
Vatongi vanorwisana vanopikisa Hans Mauritz naWim Dankbaar kupfuura,
Pizza nhengo ye shill 'seaman'.
Vose vanoziva chokwadi vanoona vave vachiziva kwenguva yakareba kuti vanhu vose ava vane shills.
Uye zvino zvinova pachena kuti mitambo ipi iri kutambidzwa.
Vose vari makoroji ehurumende aJeroen Hogerweij, ane basa rakasiyana asi nechinangwa chimwechete.
Kuratidzira uye kuongorora mafungiro 'mafungiro akasiyana' / vanotsvaka chokwadi.
Kudzorera, kwaifanira kuva: Koos Woudenberg.
Iwe unogona kutarisa dick nhau yei spunk yakasviba pa: "Koos Woudenberg anotaura pamusoro pekudzika kwegungwa paHabbibierum"
Ndinoshuma izvi zvisizvo kubva mubhokisi rekare mune tariro yokuti vanotsvaka chokwadi vanokudziridza unyanzvi kudzidza kudzidzira psychopaths dzine ngozi.
Izvi angatsaudzira Anotyisa nomuromo wake yakashapa ainzwa zvikuru zvakanaka kuita uye saka havana -as kazhinji dzinodzorwa nokushorwa mumiririri Maira kuti "Taura Myra'- chete redhiyo hurukuro, asi saka aida kuita hofori sikirini.
Isa chibatanidza / chengetedza dots, pamwe nemamwe psychopaths mubasa rehurumende dzakadai seNIco van der Ham, Maud Oortwijn, Michael Vittaliti, Micha Kat.
Vanyori mukutsvaga kwechokwadi, vanyatsocherechedza Nico van der Ham, anoita sechinhu chakareruka, asi inyove mumapfekete emupendu.
Murume anotevera Barracuda ("mutori wenhau": verenga AIVD-er) Jan Libbenga. Anoshandawo pamwe chete nechikwata chaJeroren Hoogeweij (nhengo yeAleister Crowley achidzorera chikamu che RTD).
Steve Brown (Salto TV) hainzwi sezvinoita kofi itsva ... iyo yose inotarisa mukati uye nepamusoro peAmsterdam
Nenzira, chiitiko changu (kuverenga) paBarracuda ndechekuti maTroscore Zionist haasi chirevo chakakosha pamusoro pehurumende isiri pamutemo yeIsrael. Muzvokwadi, vanonamata izvo chokwadi chokwadichinochasimbisa chete mukufungira kwake
Ichokwadi ichokwadi. Ziva (mumwe wevanyori vanonyanya kushingaira paBracuda yakabatana neSwapichou blog) kunyange muuto reIsrael uye anogara muTel Aviv (yehupi uchapupu). Vose vese vadzidzisi vane matsigi avo vanomhanya ma blogs.
Uyewo muchenjerere itsva vatungamiriri kapoka avhengane kugoverana chokwadi tarenda nengano intergalactic uye interdimensional mapoka uye kwauri kuti muri pano panyika kuti energize pachako. Muprofita itsva: Martijn Van Staveren. Zvii zvakamuomera kuti kuverenga kwakadaro? Chii achirova ndechokuti boka dzinodzorwa nzira vezvenhau (Earth Kukoshe, Guido Jonkers (WantToKnow.nl, etc.) zvose zvinopa bindu neimwe. Chokwadi, jendurumani ichi anotaura chizvaro. Kune zvikamu chokwadi zvaanotaura. In iyi, tiri kubata munhu kubva (uye) kuberekwa kwake interdimensional / aiva extraterrestrial kuonana. saka iye achitoziva zvakaitika Mega kunzwisisa ichi ruzivo pamusoro yakakura miganhu yakaoma uye interdimensional venyama. Saka ruzivo anopiwa kubva idzva guru (uye nokudaro kwazvo kunzwisisa uye akaita vachivhaira). chaizvoizvo zviri hocus zvose pocus shoma zvikuru pane wavakasarudza itsva kunounza. zviri kwaizova kudada zvakare kushanda chitendero chitsva ichi nyaya kumajaya chiedza. Alice Bailey. Pairing pamwe Saturn munda, unyengeri Chenjerera hypnosis:
Icho chichiri zvizhinji ... zvakaoma zvikuru ... saka iwe unofanira kuzvipa simba kuti uone kuti tinozodzokera kune zvekutanga. Zvakare rudzi rwekutendeuka uye kuzvipira sezvatinoziva kubva kune zvitendero. Kugamuchirwa kunyika yeLucis Trust
Marcel Messing, murume uyo akanditora pakati pekupedzisira yeFrontier congress muAmsterdam kundinyevera kuti "ivo" dzimwe nguva vangandinyengedza nehurukuro ine simba rehondo. Murume akaedza kukurudzira kutya. Murume akanyora iyo Micha Kat. Iwe unongova wekambani apo iwe uri muchengeti we "mudzidzisi asiri murume kana mukadzi" (ona 12: 03 min.) Uye iwe ndiwe mutakuri we dzidziso yaAlice Bailey. Isu tose tinoziva kuti ndiani anomiririra kuti hermaphrodite iri: Baphomet. Kugamuchirwa kunyika uye chitendero chitsva chechitendero cheSaturn.
Marcel Mesiya anowana ndarama kupinda hurukuro redunhu safarira kofi prietpraat..Een kuzotyisa shoma mukomana, asi zvino zvakare iye mumwe 't chii Club chiedza machisi kuparadzira chiedza venhema (iwe vangatoti nhema).
Uye munharaunda ino haugone kuita chero chinhu, nokuti Große Lüge anotonga:
Ndakaonawo kuti vanoshandisa nzira dzokugadzirisa, apo vanobatanidza chokwadi nenhema. Mune mamwe mazwi vanokubata iwe nechokwadi uye uropi hwekubata iwe nenhema kuitira kuti iwe usakwanisa kuona sango kuburikidza nemiti uye iwe unowira nokuda kwekunyengera kwavo kwezera.
Kugamuchirwa kunyika inoshamisa yeNew Age chepfu. Nenzira, New Age inowanikwa kubva muKabbalah / Zohar / Talmud.
asi Van Staveren anowira kwandiri kuburikidza nebhasika nehurukuro yake ye hypnosis uye mazwi ake pamusoro pe "ndiani asi murume kana mukadzi" ...
Anoita kuti zvose zvive zvakaoma uye zvinongonzwisisika kana iwe wakambosangana nemasimba aya akakwirira kubvira pauduku: iye zvino anozviisa pachake kuva rudzi rwe guru.
Hazvisi zvose zvinofadza uye zvakaoma sezvaanozviita. Uye zvirokwazvo hatifaniri kuva vashandi vashoma. Hapana vakasarudzwa avo vanoda "kusimbiswa."
Mark Passio hakusi yakavimbika mumaziso angu. Anotsanangura Masonic Chirevo pano yangu akanaka chaizvo (sokunge panewo mashoko inodzidzisa) uye ari mutsigiri Aleister Crowley (aizviti Chipuka 666).
Kana achitaura pamusoro pebwe rekona rinofanira kubviswa kubva pachiedza kuburikidza nemuumbi wekunyengera, ipapo icho "chiedza chaRusifer" (muumbi).
Murume uyu anogadzirawo ngozi ine ngozi yekuchengetedza mumeso angu.
@Martin, kamwe Passio muchengeti wemagedhi uye munyengeri asi ane ruzivo rwakanyanya pamusoro pemasangano aya akakodzera kuteerera.
Ichi chifananidzo chandakawana paIndaneti chiri kufara uye chinopa mifananidzo yakaisvonaka yematunhu ose muEurope:
New Age Yakachena kabbalah
Ini handigoni kurega kuvekesa zvisikwa. Iniwo ndinoedza kutora chinhu kubva kune vamwe vadzidzi. Ndinofunga kuti zvinonakidza chaizvo kuzviita, uye zvinoratidzawo nzvimbo yakaderera mukutaridzirwa.
Hanneke, ndinokutendai zvikuru pamusangano uyu unofadza, nhamo mazuva 2 ari kuuya.
Inokurudzirwa zvikuru kune ani zvake anoda kudimburira kupinda mukati mekuongorora nyeredzi! "
Iwe unofunga kuti akabatsirwa nepeji yevarai.
kamera akanyora kuti:
Wakawana sei kuti Kuonga kunopedza basa rakachena kune vanorota.
Ndiri, mutauro wake unoshandisa zvakakwana, murume akazara, akachenjera asi achiri benzi, saka haasi akachenjera asi saNico van der Ham, pure verader type (horror clowns mumakumbo madutu)
Quote muchitsiko chake, ona chinyorwa chiri pasi apa: "kunyange amai vangu vanodikanwa vanofunga kuti ini .... mhosva yezvakaipa, ha ha ha iwe haugoni kutora zvakanyanya kana iwe ukanyora icho muchidimbu chakakomba pamusoro pekukanganisa kwehurumende (kururamisira) nezvimwe
Kutaura nezve 'kuvenga', ndakaona nyaya inonakidza inopindirana nemashoko ekutsvaga: Dambudziko-Reaction-Solution.
Uurope hweEurope husingavhoti-asi ivo vakagadzirira kubatana nekumukira kwemhomho
Vechiduku veEurope vanorwara nehuwandu hwemamiriro eEurope. Uye ivo vakagadzirira kuchinja, maererano nekuongorora kwechangobva kuitwa.
Munyika ye580,000 vakapindura munyika dze35 vakabvunzwa mubvunzo: Ungada here kubatanidzwa mukukwikwidza kukuru kwechizvarwa chechiremera kana zvakaitika mumazuva anotevera kana mwedzi? Vanopfuura hafu kana 18- kusvika kune vane makore gumi nemana vane HNUMX vakati hongu.
Zvimwe zvakangoitika ... The Netherlands (Orange = 33) inoguma pane imwe nzvimbo ye13e ine mugove we33%. Zvinoratidzika sarudzo dzeVVD mhinduro? , yakagadzirwa data? Izvozvo zvingave zvikonzero zvekutora zvakare.
Sjon akanyora kuti:
Iyo honye imwe inofamba kuenda muInterstellar yakaiswa padhuze nepasi reSaturn. Via iyo iyo gonyeti imwe inoenda kune imwe gorali, uko kwepuraneti kwakawanikwa kunowanikwa hupenyu.
Iye protagonist anoita kunge akatumira mameseji kubva kune ramangwana kwaari, kuti amutumire kuNASA, kwavanoita kunge vakabatikana kutanga rwendo rwegonye. Nekudaro, iro gonye rinoratidzika kunge rakavepo kwemakore 48. Kune zvakare gomba dema pedyo nehonye, ​​Gargantua. Zvakaita sebundu remumvuri mufirimu rakafanana chaizvo nemufananidzo wekutanga wegomba nhema wakaziviswa pakutanga gore rino. Mhando yekufungidzira hurongwa saka….
« Edith Schippers iye zvino anodawo purogiramu yako yeDNA
Elon Musk bhizimisi mukuru kana DARPA signboard for transhumane cyborg man? »
Total Visits: 14.518.857
Smart tekinoroji uye tekinoroji kutonga kwepasirese kuchachengetedza mamiriro ekunze
Rutger Bregman anodaidzira fascist UN kutonga
Iyo yakakura Sinterklaas kusimudzira: yakanaka kushamisika yakarongedzwa yakarongedzwa!
Martin Vrijland op Mune mamiriro emapurisa, iwe unoda kurambidzwa kwekutapa mapurisa uye "vabatsiri" vanopa
XanderN op Mune mamiriro emapurisa, iwe unoda kurambidzwa kwekutapa mapurisa uye "vabatsiri" vanopa
guppy op Mune mamiriro emapurisa, iwe unoda kurambidzwa kwekutapa mapurisa uye "vabatsiri" vanopa
Sunshine op Ziva iyo nhoroondo kuti unzwisise iyo UN Age 2030